Debian vs Ubuntu: kurwa kwema greats maviri. Ndezvipi zviri nani? | Linux Vakapindwa muropa
Kusarudza kugovera pakati pesarudzo dzakawanda kunze uko kune basa rakaoma, zvinoenderana nezvaunoita kana zvaunoda unogona kufarira imwe kana imwe. Zvakawanda zvinyorwa zvakatoitwa nezve migove yakanakisa, asi mune ino kesi zvatichaita kuongorora maviri anorema enyika yeLinux uye Tichasangana naDebian uye nekwakabudirira kunotora Ubuntu.
Sevanhu vese, Ubuntu ndeye Debian-yakavakirwa kugovera, asi haisi iyo chaiyo kopi nechero nzira uye pane zvakafanana zvakafanana asi zvakare mutsauko mukuru pakati pezviviri. Pano isu tinofananidza Debian vs Ubuntu uye isu tinowana izvi ruzivo nenzira yakapusa kuti iwe ugone kusarudza imwe kana imwe. Iye mwanakomana achapfuura baba here kana zvinopesana naDebian ane zvakawanda zvekutaura?
1 Debian uye Ubuntu: ese ari maviri mount mount zvese
2 Debian vs Ubuntu izvo zviri nani?
2.1 Zvikonzero zvekusarudza Debian
2.2 Zvikonzero zvekusarudza Ubuntu
Debian uye Ubuntu: ese ari maviri mount mount zvese
Sezvakaita muhondo ipi neipi, chinhu chekutanga kuunza vanopikisa. Kunyangwe ivo vachida diki mharidzo mune maviri maLinux anogoverwa seakakurumbira seaya, zvinogara zvakanaka kuzviisa isu kune avo vatsva kune ino nyika kana vaverengi vanobva kune mamwe mapuratifomu.
Iyo Debian chirongwa chave chikuru macrojekiti imwe yeakakura kwazvo anoonekwa muLinux nyika. Iyo ine vazhinji vanogadzira uye nharaunda yayo huru yagadzira akawanda magwaro anowanikwa ekukubatsira iwe. Uye zvakare, kuburitswa kwayo kunozivikanwa nekugadzikana uye kuita zvine mutsindo, zvichiita kuti ive nzvimbo inofarirwa nevazhinji uye hwaro hwekugovera kwakawanda.
Kunyangwe iri yemahara, inokwikwidzana nevamwe vakaita seRed Hat neSuSE nekuda kwehunhu hwayo, zvakare mapakeji eDEB anokwikwidza iyo RPM sekunge nyika yeLinux yakakamurwa kuita misasa miviri mikuru. Y Tine chikwereti cheizvi zvese kuna Ian Murdock, akatanga chirongwa ichi mu1993. Mushure mekudzidza kuYunivhesiti yePurdue, ainyora gwaro reDebian raaizoshandisa sehwaro hwedistro uye raizobatanidzwa nemauto evabati mukusimudzira kwayo.
Zita raIAN neiro remusikana wake ipapo DEBorah, ipa zita kugove. Mushure memakore mashoma, mu1996, Bruce Perens anotsiva Ian Murdock semutungamiri weprojekti. Asi Bruce aizoendawo pamudyandigere muna 1998 kuti agadzire mumwe mutungamiri, asi chirongwa ichi hachizive shanduko idzi, ichienderera mberi ichikura kunge chando.
Kune rimwe divi reringi tinaro Ubuntu, kugoverwa kwakagadzirwa neCanonical uye yakavakirwa paDebian. Muchokwadi, Ubuntu ndeimwe yemakumi zana ekuparadzirwa kwakavakirwa paDebian, asi zvakare, Ubuntu ine chizvarwa chechitatu chine mamwe mazana zana distros akavakirwa pairi uye zvichingodaro kusvika kugadzira mhuri hombe yemastros.
Canonical ikambani yeBritish yakagadzirwa neSouth Africa Mark Shuttleworth uye nemaitiro anokwanisa kuyeuchidza chimwe chinhu nezvehuzivi hwaApple, kugadzira software yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa (pfungwa huru yaive yekuita iyo inotyisa Debian sisitimu yekushandira yevanhu), yakanaka uye ine dhizaini yaida kumira kubva iyo kune mamwe ma distros. Kune rimwe divi, Ubuntu haina hanya zvakanyanya nerusununguko, asi nekuda kwekushandisa, kusanganisira isiri-yemahara software. Iyo zvakare iri distro nyowani ichienzaniswa neDebian, sezvo yekutanga vhezheni yakabuda muna 2004.
Iye zvino zvatinoziva zvese ruzivo rweumwe neumwe wekugovera, ngatiendei nekuenzanisa kwe Debian vs. Ubuntu.
Debian vs Ubuntu izvo zviri nani?
Kana tikapindura uyu mubvunzo nenzira yakapusa, tinenge tichireva nhema uye avo vanoti Debian ari nani vakarurama chaizvo sevaya vanoti Ubuntu ndizvo. Kugoverwa kwese kuri maviri akanaka uye kunodyidzana mukati meumwe nekufambira mberi kwavanoita. Naizvozvo, ndinotenda kuti Debian inodikanwa kuti basa reCanonical neCanonical riitwewo kunharaunda yeDebian.
Zvatinogona kuita kunyora zvakateedzana zvakanakira nekuipira cheumwe neumwe kuitira kuti uve neruzivo rwakajeka ...
Zvikonzero zvekusarudza Debian
Debian ndiye inowanikwa kune mamwe maumbirwosenge PowerPC, x86 (zvese zviri 32-bit uye 64-bit), ARM, SPARC, MIPS, PA-RISC, 68k, S390, System Z, IA-64, nezvimwe. Naizvozvo, inogona kumhanyisa pamakomputa akawanda kupfuura Ubuntu, iyo inotarisa zvakanyanya pamakomputa epamba kana maseva x86.
Kuisirwa ne mamwe maitiro ekugadzirisa.
Debian inounza GNOME nekutadzaKunyangwe ichigona kushanda neakawanda enzvimbo dzakasiyana dze desktop, mune iyi pfungwa yakanyatsoenderana neBuntu.
Debian inokutendera iwe kuve nayo akaoma uye akatsiga mapakeji sedombo mushanduro dzekare kana kuva pamberi kumberi kwetekinoroji neazvino mashandiro pamutengo wekusagadzikana kukuru.
Kazhinji ndizvo yakachengeteka, zvikuru customizable uye ane yepamusoro waivako.
Kunyangwe vese vari vaviri vakasununguka, Debian kurwa kwesoftware rusununguko, nepo mukati meUbuntu mapakeji ane marezinesi ekuchengetedza akabatanidzwa.
Yakawanda inokurudzirwa "imbwa dzekare" vane ruzivo rwepamberi uye vakagara munyika ino kwenguva refu.
MuDebian pasuru yega yega ine muchengeti (maintainer) yakapihwa, nepo iri muUbuntu haina kudaro, ichiita nyonga nyonga mune dzimwe nguva.
La kukanganisa kururamisa kushandisa Debbugs tsamba yekutumira haina kusanzwisisika pane Ubuntu Launchpad.
Utnubu (Ubuntu kumashure) chirongwa chinokutendera kuti "udzore" shanduko dzakaitwa kubva kuna Debian kuti uwane Ubuntu uye nekudaro uine mamwe mapakeji anowanikwa eUbuntu ayo anga asiri aDebian.
Zvikonzero zvekusarudza Ubuntu
Kazhinji, Ubuntu software mapakeji akawedzera-ku-kudhara pane Debian. Ubuntu ipfupi kuburitswa uye nguva dzekuvandudza zvinoreva kuti zvine mukana uyu, kunyangwe iwe uchigona nguva dzose kusarudza kuzvimisikidza iwe pachako.
Zvakawanda zviri nyore uye zvine hungwaru simaki. Izvo zvakare zvakareruka kushandisa, saka zviri nani kune vatsva kana vanhu vasina ruzivo rwakawanda ...
Pane zvakawanda zvinonaka nematafura akasiyana, senge naDebian, haina kungogumira kune desktop desktop, iyo nekumisikidza iri Kubatana paUbuntu.
Pamutengo wekushandisa zvakanyanya uye tsigiro iri nani yehardware, iko kuita uye kuchinjika kwakasununguka zvishoma.
Vagadziri kazhinji vane kufarira kukuru kugadzira software yeiyi distro nekuda kwekuzivikanwa kwayo nenharaunda.
Kutendeuka Canonical iri kutsvaga zvakanyanya chinhu chakakosha kune ramangwana.
Yakareba term kugadzikana. Ubuntu inopa kutsigira kwenguva refu mune ayo maLTS vhezheni kuitira kuti vagone kuenderera nekuchengetwa nekuvandudzwa kwenguva yakareba, nepo Debian, kunyangwe kuburitswa kwayo kuchiwanzo kutora nguva, kunongoburitsa Unstable (budiriro), Bvunzo (bvunzo) uye Shanduro dzakagadzikana. Uye zvakare, kuburitswa kweshanduro nyowani dzeUbuntu kunoitwa yega yega mwedzi mitanhatu, nepo iyo yeDebian iri yakawanda zvishoma nezvishoma.
ari itsva technologies Vanosvika pakutanga kuUbuntu nekuda kwekubatana kweCanonical nemamwe makambani.
MuUbuntu tine zvakawanda mapakeji mhando kana mapoka anoenderana nechinzvimbo uye rezinesi, sezvo muDebian ivo vakaganhurirwa kuzvinyora se: chikuru, chinopa uye chisina-mahara. Ubuntu ine: main, inorambidzwa, zvakasikwa uye zvakasiyana-siyana, maviri ekupedzisira ari "asina kufanira" mapoka emapakeji.
Yakanakisa Imba Yekuvaraidza Platform, zvemultimedia zvemukati nemavhidhiyo mitambo inogamuchirwa zvakanyanya muUbuntu nekuda kwekuzivikanwa kwavo. Muenzaniso weiyi ndiwo akawanda mazita eSteam eUbuntu uye iyo Steam Mutongi mutambo mutambo wekutsigira.
Kubatana? Ichokwadi ndechekuti mhedzisiro yekuenzanisa uku kweDebian vs Ubuntu inofanirwa kuiswa newe. Zvichienderana nezvamunoda, unogona kusarudza imwe kana imwe. Muzhinji, kana iwe uchizokwira sevha kana uchida kuti michina igadzirise, sarudzo yako ndeye Debian. Asi kana iwe uchida kureruka, shandisa zvakajairika kana zvemitambo yemavhidhiyo, uye iwe unoda kuenderana kunoenderana neMac OS X kana Windows, sarudza Ubuntu.
Usakanganwa kupindura, unogamuchirwa…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian vs. Ubuntu
John Manuel Olivero akadaro
ndatenda, hombe posvo, ini ndakatanga kutenderedza makore makumi maviri apfuura ne linux, inguvai, ipapo ndaifanira kuisiya izvozvi mamiriro angu ezvinhu anotendera kuti ndidzoke, muchokwadi canonical uye ubuntu zvaisavapo kana vachifanira kudaro, verenga ngowani, suse. Mupiro mukuru, zuva rekufara. Ndine Ubuntu 20, inoshamisa.
Pindura Juan Manuel Olivero
carlos martinez akadaro
Zvinoenderana nekuverenga kwevhoti uye nesarudzo yakabvumirana uye nekurova, anokunda anga ari: PAMPAMPAMPAMPAM
Pindura Carlos Martinez
Fabian Alexis akadaro
Iyo debian simaki iri nyore kushandisa, haina chinhu chekugodora Ubiquity.
Iye zvino iwe unofanirwa kuramba uchitsanangura kuti Debian Stable ndiyo yaunofananidza mune akawanda mapoinzi, nekuti kana iwe ukashandisa kuyedza kana SID iwe une mapakeji angangoita kusvika pari zvino (muchokwadi Ubuntu inotora iyo yekuyedza / sid bazi). Chinhu chinonakidza kwazvo chavanofanirwa kuve nacho kunyange paSID chakasimba kupfuura "kugadzikana" Ubuntu.
Kuburitswa kweDebian makore maviri ega ega uye semuenzaniso Jessie ane rutsigiro rwakareba, mamwe mavhezheni haana "kuburitswa" asi anowanikwa kubva panguva yekutanga, kuteedzera kusimudzira kwechitevere chinotevera.
Iwo mapakeji kana iwe ukatarisa mune debian ndeaya ese anosanganisira ubuntu uye kunyanya, kuti Ubuntu inobvumidza iyo ppa, kana zvichibvira, asi ivo vari vangangoita vari marginal muhuwandu.
«Yakanakisa imba yekuvaraidza chikuva, zvemultimedia zvemukati uye vhidhiyo mitambo inogamuchirwa zvakanyanya muUbuntu nekuda kwekuzivikanwa kwayo. Muenzaniso weiyi ndiwo akawanda mazita eSteam eUbuntu », sekuziva kwangu mitambo ndeyeSteam, steam iri mune ese linux distros kuti iiswe uye ndinokuyeuchidza kuti Steam OS yakavakirwa paDebian.
Kusarudzika kutaura kuti "iyi distro ndeye ..." nhasi GNU / Linux iri padanho rakaenzana reShandiso. Ini handisi mugadziri uye ndinoshandisa debian uye ini handishaye chero chinhu chingapiwe naUbuntu "icho chinoitirwa kushandiswa zvakanyanya mudzimba" sekureva kwako.
Chinhu chega chinogona kuratidza kuti uri kurudyi inotsigirwa neyemahara
Pindura kuna Fabian Alexis
Warevesa Fabian, ndanga ndichishandisa mitambo yeDebian neSteam pasina matambudziko kwenguva yakareba, uye vari kuita mushe mushe. Kubva ipapo ndakachengeta 160 Gb diski iyo yandakachengeta ne XP kutamba. Kazhinji ini ndinotamba CS-GO.
Uye pakupedzisira, panongedzo 3 ndingadai ndisina kuzviisa.
Ini ndinotenda kuti wakanda misoro kunhamo, kana Debian haana kugadzikana kupfuura Ubuntu uye zvakanyanya kushomeka kuita zvirinani, zvese zviri mushanduro yaunoisa uye nemabatiro aunozviita, Ubuntu inogona kuiswa kubva padiki vhezheni uye iwe sarudza izvo iwe unoda kuisa uye chii chisiri, kana iwe uri nyanzvi uye iwe uchida kumisikidza uye uine simba pamusoro pezvese zvinhu, nyora yako distro uye iwe uchave uchimhanyisa pamushini wako.
Mune ruzivo rwangu Ubuntu inokurumidza kukurumidza kupfuura Debian mumamiriro akafanana uye yakagadzikana seiri pamusoro muLTS shanduro, tisingatauri kureruka uye kuzivikanwa kwehardware uko pasina ruvara.
Ndiroverere kana uchida, asi Ubuntu ndizvo zvaifanirwa kuve naDebian uye zvaisambove.
Ndiroverere kana uchida, asi Ubuntu ndizvo zvaifanirwa kuve naDebian uye asina kumbove….
Pasina imwezve ado, mumaonero angu, Ubuntu inova nechokwadi chekuti zvese zviri "zvakapusa uye zvakanaka", kudzima iyo software nyowani, kudzingirira iyo fucking tsika yeWindows uye Mac, ndiko kuti, kuwedzera, uye tinodzokera kuchinhu chimwe zvakare. Ndekupi iko rusununguko rwunoiswa neGNU? Mukomana, naMwari, mapuni mapakeji anopedza mwedzi achiedzwa uye asina-bug; Ubuntu inobvisa Mansalva kunze, ini handidi kuona Ubuntu Millenium Edition rimwe zuva; asi ndizvo zvavari kuvavarira.
Ngatione vakomana ndakaita iyi diki kuyedza kuti ndikupe zano, zvanyanya ndakasarudza kuisa Debian neUbuntu pane yakaderera-zviwanikwa laptop, isina kusimba AMD senge AMD E1-2100 uye 4GB ye RAM.
Zvakanaka, ndakaburitsa zvese kuburikidza nebani rimwe chete reOracle Virtual Bhokisi uye neinononoka internet kubatana kwe1mb.
1.Kuisa nguva, muUBUNTU, mmm yakatora zvachose, maawa maviri, kusara kwekuti iyo 2.5 distro inorema 16.10gb mune yayo 1.5-bit desktop desktop (ini ndakapfuura kana kupfupika nemaumbirwo) MuDebian neiyo Jessie 32 x8.6 ye yakasununguka 86 mb, zvakatora 650 awa kuisa. Ini handidi OS iyo inoisa akawanda mapakeji iwe ausingazomboshandisa.
2. Performance, Ubuntu haina kusimudza nekuda kwezvishoma zviwanikwa zvemuchina, zvaive zvisingaite, kunonoka kushanda muUbuntu, kutambudzwa kweChinese, Debian kune rumwe rutivi neiyo LXDE desktop, hazvisi kuti yaive yakanyorova, asi zvakadaro ndakakwanisa kushanda uye panguva imwechete ini ndaive netsika yekushomeka kwayo. Debian hapana mubvunzo anoshandisa mashoma masosi kana kuti pane anoziva nzira yekushandisa zviwanikwa zvirinani pane vana vayo.
3. Madhiraivha, ese ma distros ndakaziva kadhi isina waya inova ndiyo inogara ichinetsa mune idzi kesi.
Huye, kune avo vanoda kuyedza kana kugadzira chimwe chinhu nekukurumidza muLinux, shandisa debian kana uchinge uchishomeka nenguva uye twine kutenga yakanaka simbi. Zvino kana iwe uchiramba uchirarama unoshayikwa nzvimbo senge iyo iri mune yakanaka windows uye unozvirova dundundu nekuvandudza yazvino kernel pasina kubwaira uye iwe uine yepasi yechipiri musimboti-i3 muchina, kanda mabhora pairi neUBUNTU, ikozvino, ini handizive nei kushamisika Ini ndinoedza mahanduro neshanduro dzemashizha emudhibi, uye ndinogara ndichiguma ndichidzokera ku DEBIAN, handizive kuti sei
Ini handifunge kuti ndiwo chero musoro, Sparkylinux yakavakirwa paDebian Kuyedza kana Robolinux yakavakirwa paDebian 8.2 inopa chiuru kudzoka mukuita kune chero vhezheni yeUbuntu, ini ndinayo kupfuura yakaratidza.
Ini handisi nyanzvi yeLinux asi ini ndine zvese zviri zviviri pc uye 3 Ubuntu zvigadzirwa uye Fedora uye ndine zvakawanda zvekunakidzwa nekufunga kuti ndeipi yekuburitsa pese pandinobatidza pc.
Chinhu chaicho ndechekuti, ndinowirirana navo vese vatanhatu uye misiyano yavo.
Muenzaniso wakanaka. SparkyLinux is super fluid uye yakazara. Antix neBunsenlabs zvakare zvinokurumidza kwazvo.
Chandinogona kutaura nezvacho ndechekuti Ubuntu yakapa kurudziro inodiwa kuLinux panguva iyoyo (kubvira makore makumi mapfumbamwe ndaedza - kusabudirira - kuisa chero Linux, kudzamara ndawana kubudirira kwangu kwekutanga neUbuntu makore apfuura), kune ruzhinji rwevanhu inogadzirirwa mushanduro yayo ye "desktop", kunyangwe zvese zvavanotaura pa "technical issues".
Iye zvino kana izvo zvaunoda kuti zvive zvakakomba, saka Debian yevhavha uye kuti zvisinei neSystemD (isu kashoma tinoda kutangazve sevha uye tinogona kutarisira kuti init inotanga -uye zviri nyore kuitisa-)
Pazasi mutsara: Ubuntu yevashandisi vekupedzisira uye Debian yemaseva, mamwe akasiyana aripo kugutsa kuravira, kwete kukosha.
Ini ndinongokuudza kuti kana, pandakatanga kubata neLinux, ndakange ndatarisana naDebian pachinzvimbo cheUbuntu, pamwe nhasi ndanga ndisiri mushandisi weLinux, uye ndanga ndisingade kutsanangurira vanhu zvakanakira zvainopa, uye handifunge kuedza mamwe madhiri kana kutochinjira kune imwe, nezvimwe ...
Chokwadi Ubuntu haisi iyo yakanakisa, kana iyo inoita zvakanyanya, kana iyo inoita basa chairo iri nani kupfuura mamwe, asi ndiyo distro iyo yaita kuti zvive nyore kune vazhinji vedu pasina zvakanyanya kupa chengetedzo, mhando, kana kuita. mashandiro… Uye ine chokwadi hachisi chakaipisisa zvachose. Inoita zvese zvine mutsindo uye inowanikwa kune chero munhu.
Ndokusaka ndichifunga kuti ndiyo yakanakisa inogona kuwanikwa, kana tikataura kubva pakuona kwemushandisi uyo anoda system ine vimbiso uye mukati mekugona kushandisa PC yake nenzira yakanaka kwazvo.
Uye ini ndinotaura izvi, hongu, ndichiziva kukosha, kukosha, kuita, nezvimwe, zveDebian. Asi ini ndinoramba ndichifunga kuti dai zvisiri zveUbuntu uye nezvakanditendera kuti ndidzidze, ndingatotadza kuongorora izvo zvinomirirwa naDebian.
Ndinoda kuziva kuti wakawana kupi mufananidzo neakafananidzwa mairafu ari pakati pe distros, nekuti chokwadi chokwadi iyo data yandisingazive kwarinobva. Kunyanya muArch, ini handinzwisise mamakisi ehurdware nekuti iine rutsigiro rwakafanana kana zvimwe maererano nemadriver kupfuura mamwe ma distros, mune maHTML kana ichinongedzera kumagwaro ini ndinofungidzira kuti handinzwisise kuti sei ichiisa iwo mamakisi kubvira Arch wiki ndiwo akanakisa zvinyorwa Pane ese ma distros pasina mubvunzo mukugadzirisa anofanira kunge aine huwandu hwakawanda kana zvirinani zvirinani kupfuura Debian nekuti mushandisi anoisa nekugadzirisa zvese zvese. Uye pakupedzisira, kunyangwe ichikakahadzika, mumaonero angu kuita zviri nani kupfuura Debian sezvo iine kubvumidzwa kwakawanda maererano nevatyairi uye yakareruka.
PS: Handina chandinopokana nacho asi ndicho chandinoziva nani mushure meArch hehe.
Mwedzi mishoma yapfuura ndakatanga neLinux, kutaura zvazviri ndine izvozvi ini ndinoshandisa Debian kudesktop uye Ubuntu yelaptop uye ndinofanira kubvuma kuti vakanaka sei kunyangwe paine misiyano. Pamwe handikwanise kunyatsoona misiyano yavo nekuda kwekusava neruzivo asi ini ndiri kuona kugadzikana kuri nani muDebian.
Asi kana zvasvika pakushandisika Ubuntu iri pamberi, uye nhasi nharaunda yeLinux inoita kunge yakakamurwa pakati peUbuntu nevamwe, ini ndinoedza kutsvaga chimwe chinhu chakanangana neDebian semuenzaniso uye mhedzisiro yacho ingangoita zvese nezve distro kubva kuCanonical, izvi zvinogona zvimwe zvinokuvadza mune ramangwana.
Zvisinei, ndinogadzikana navo uye handisi kuzochinja.
Ndanga ndiri linux mushandisi kwegore nehafu. Ndakatanga naLubuntu, ndichibva ipapo ndakaenda kuMint ndikazopedzisira kuDebian 7. Ndakaisa Debian 8 uye kubva pano havandifambise ... Zvese pane yangu laptop yebasa neyangu ndine Debian uye padesktop ndine Mint. Iko kudzikama kwakakosha, uye kana iwe waida kubata windows chirongwa ipapo iwo chaiwo muchina. Rarama kwenguva refu Linux, refu kurarama yemahara software!
Pindura kuna jose.cortesd
Ivo vanofanirwa kuve vakasimba, vakanyanya kutarisana nevane ruzivo ruzivo.Ubuntu hwanyanya kune vana.
Ndezvipi zvisina maturo zvawakaburitsa ... zvisina maturo zvezuva iri, wanga uine nyaya imwe chete kwemakore, nechikonzero chimwe chete ... hapana kana chaunogona kuita mudhibian kwete muubuntu, zvinopesana kana paine chinhu chaunogona kuita mu ubuntu uye kwete mu debian ... chiise uye ugone kufamba, semuenzaniso, chimwe chinhu chakakosha sekusecha paInternet, icho chero munhu achashandisa komputa yake haafanire kunge asina kutanga watsvaga mutyairi uye uchinyora iyo ... iyo girafu yakafanana, tsvaga uye uiunganidze, kuoneka kwaDebian kwakafanana nePC kubva kuma90s .... Muchidimbu, kana iwe uri hippie yemakomputa kana iwe uchifunga kuti uri. mudiki richard stalman iwe waunorota kuva muiti wenzvimbo yako, ini ndinotyora nyanga na debian, kana iwe uchida kushandisa komputa yako uye kugona kuita zvese zvaungaite mukubuda, shandisa ubuntu ... rega kutaura zvakapusa nezve kana muna debian izvi kana kuti debian izvo, ndakazvishandisa zvese uye maonero angu, unorarama nemazwi asi pasi uri prehistoric, kugadzikana ... zvichibva pakushandisa yechinyakare zvirongwa, ndinogona kuzviita kunyangwe mumawindo, pane isina kukodzera zvakanyanya maererano nekudzikama kana iwe ukachiwana pamutengo wekusara makore mashanu kumashure kwevamwe, kwete kuverenga rakakura garo rekuchengetedza iro rekushandisa chero chinyakare bhurawuza, ine 1 chete vhezheni kumashure kwevamwe iwe watove wakashama paInternet. , bata shanduro dzezvishandiso, nezvimwe uye isu takatotaura nezve iko kugadzikana kukuru, prehistory hakusi kugadzikana, ndeyekare, yakasimba, yakagadzirwa nedombo rakasimba
Pindura kuna lnx665
Navo vanofanirwa Jessie 8.3 zvinopfuura kuratidzwa vachishandisa GNOME kana KDE kuti ivo vanofanirwa kuve mambo uye Ubuntu ingori iyo mwanakomana waDebian, yakagadzirirwa vana vanopotsa Windows.
Ivan Castillo akadaro
Zvinotaridza kuti hauzive zvauri kutaura nezvazvo, iko iko kunyorera kwese kunoshandiswa muUbuntu kunouya zvakananga kubva kunofanirwa, chaizvo kubva mushanduro isina kugadzikana. Maitiro ekuparadzira ese ari munzira dzakasiyana, Ubuntu kusiyana neDebian ine nharaunda yakapusa yemushandisi wepakati. Uye izvi hazvireve kuti mune debian haugone kuita zvakafanana, kana zvisiri izvo iwe ungangoda pamwe ungawedzera ruzivo. Iwe haugone kutaura nezve debian zvakadaro, kunyanya nekuti ubuntu (uye ese maumbirwo uye mavara) zvinoenderana zvakanangana nezvese zvinopihwa nedebian kune ayo ekuchengetedza. MuUbuntu mukuburitswa kwega kwega kune matambudziko nemabhugi, uye izvi zvakajairika kana tichifunga kuti yakavhurwa nezwi rakatemwa uye zvimwe zvinhu hazvigone kukwenenzverwa. Ini ndiri mushandisi wehunhu, nekuti ini ndakatanga pane iyo sisitimu yekushandisa kubva mushanduro 9.04, asi nhasi ndaisa debian pane yangu pc (kunze kwekuva nehumwe murume pane imwe uye xubuntu 16.04 pane netbook) uye zvakawanda zvezvandakadzidza mairi ndanga ndiri kukwanisa kunyorera ubuntu nekuti ini handisisiri "novice mushandisi" akadaro. Iwo manejimendi manejimendi uye kugadzikana zvakanaka kwazvo, uye hazvisi chete nekuda kwekushandisa dzakadzikama vhezheni dzekushandisa, imhaka yenzira imwecheteyo zvinhu zvakarongedzwa muDebian. Uye tenda kwandiri zvinoratidza zvakawanda; Ndinoshandisa steam, ndinogona kuona mafirimu, kufambisa Internet, kugadzirisa. Kana ari mabhurawuza sezvaunotaura, ini ndinogara ndichishandisa chrome, asi firefox inoshandisa iyo lts vhezheni, zvinoreva kuti icharamba iri vhezheni 45, asi zvese zvekuchengetedza zviripo zvirimo. Uye izvi imhaka yekuti iyi vhezheni yakanyanya kutarisisa nharaunda dzebhizinesi, uko kumwe kunyorera kana masevhisi kunoshandiswa uko kana shanduro yebrowser ikachinja, inogona kuve nemhedzisiro isingadiwe. Kana iwe uchida zvimwe zvakavandudzwa vhezheni mu debian iwe unogona kushandisa izvo "zvisina kugadzikana" zvinyorwa uye ini ndozviisa mune makotesheni nekuti ivo vatopfuura nemuyedzo nguva, chaizvo iwo asina kugadzikana vhezheni dzedebian ndidzo dzinoedza. Debian ndiko kugoverwa kwaamai kwevamwe vazhinji, uye sezvandagara ndichitaura mukuravira, mhando dzakaputswa, kana ubuntu iri yakanakira zvakanaka, ndinofunga ese ari maviri akanaka, asi zvinoenderana nezvaunoshandisa uye pamusoro pezvose, yakawanda sei kuisa iyo inoshanda system. Kwaziso.
Pindura kuna Iván Castillo
Ndinozvida zvese. Ini ndinoshandisa zvese zviri zviviri. Ini zvese ndakaisa pazvikamu zvakasiyana. Ini ndinoshandisa iyo inoratidzika kwandiri maererano nemanzwiro andinawo. Handikwanise kuramba kuti Debian anonyanya kushinga uye akatsiga. Asi Ubuntu zvakare ine zvinhu zvayo, kunyanya zvinonyorova.
Asi zvakadaro handikwanise kugadzira pfungwa dzangu.
Pindura kuna acevalgar
Ndezvipi zvisina maturo zvawakaburitsa kunze ... zvisina maturo zvezuva iri, wanga uine nyaya imwe chete kwemakore, nechikonzero chimwe chete ... hapana kana chaunogona kuita mu debian uye kwete mu ubuntu, zvinopesana kana paine ndechimwe chinhu chaunogona kuita mu ubuntu kwete mu debian ... chiise uye ugone kufamba, semuenzaniso, chimwe chinhu chakakosha sekusecha paInternet, icho chero munhu achashandisa komputa yake haafanire kunge asina kutanga watsvaga mutyairi uye uchinyora iyo ... iyo girafu yakafanana, tsvaga uye uiunganidze, kuoneka kwaDebian kwakafanana nePC kubva kuma90s .... Muchidimbu, kana iwe uri hippie yemakomputa kana iwe uchifunga kuti uri. mudiki richard stalman iwe waunorota kuva muiti wenzvimbo yako, ini ndinotyora nyanga na debian, kana iwe uchida kushandisa komputa yako uye nekugona kuita zvese zvaungaite mukubuda, shandisa ubuntu ... rega kutaura zvakapusa nezve kana muna debian izvi kana kuti debian izvo, ndakazvishandisa zvese uye maonero angu, unorarama nemazwi asi mumunda uri prehistoric, kugadzikana ... zvichibva pakushandisa echinyakare zvirongwa, ndinogona kuzviita kunyangwe mumawindo, pane isina kukodzera zvakanyanya maererano nekudzikama kana iwe ukachiwana pamutengo wekuenda makore mashanu kuseri kwevamwe, kwete kuverenga rakakura garo rekuchengetedza iro rekushandisa chero chinyakare browser, ine 1 chete vhezheni kumashure kwevamwe iwe watove wakashama paInternet. , bata mavhezheni ezvekushandisa, nezvimwe uye isu takatotaura pamusoro peiyo super kugadzikana, prehistory haisi kugadzikana, ndeyekare, yakasimba, yakagadzirwa nedombo rakasimba, zvinongova
Zvakanaka nemhinduro yako iwe wakangosimbisa kuti Ubuntu ndeyevana. Nderupi rudzi rwekuchecherera mhinduro yako.Chidimbu checrybaby hdp
Shandisa iyo isiri yemahara vhezheni yekuyedza / sid (isina kugadzikana) bazi, pane bhurawuza iwe enda kune yepamutemo peji uye kurodha pasi dhiri kana bhanari, uye rega kuchema hdp.
Icho chinyorwa chakanaka, ichokwadi kuti ese ari maviri akanaka, ndanga ndichishandisa Ubuntu kwemwedzi mishoma uye ndinonzwa kugadzikana nawo, uye ndinofunga izvo zvakashinga Zvakashinga ndizvo zvakaita kuti vashandisi vazhinji vasasvika kuLinux, nekuti zvese Vanotenda kuti iwe unofanirwa kuve weHacker wevaHackers kushandisa kugoverwa kweLinux, uye vazhinji vevashandisi veWindows vana, ndosaka takatanga muLinux takabatana naUbuntu, uye Ubuntu akanzwisisa izvo uye ndosaka kupinda kukuru pakati pevashandisi. Ndosaka ini ndichida kutaura kuti Debian yakaipa kana kuti yakagadzirirwa vashandisi vane simba, inogona zvakare kushandiswa neanovices, asi huzivi hweUbuntu ndihwo hwakaita kuti iwane vamwe vashandisi zvichienzaniswa nemamwe ma distros.
Sekutaura kwechinyorwa chaizvo, panguva kwete. 7 »Idzo" Imbwa Dzekare "dzinofarira Debian nekuda kwechiitiko chatinacho mune ino GNU / Linux nyika«. Ini ndinozvitora semumwe wavo uye ndinonyatsoda Debian (yemaseva uye yeDesktop).
Asi nenzira imwecheteyo ini handizvidze Ubuntu, vazhinji vakaburitsa pachena zvikonzero zvavo uye zvakangofanana, nekuti ivo vakauya mahara software kubva kune ino kugovera. Uye zvakare, ini ndinowedzera kuti kana usiri wekucomputer sainzi nharaunda (kana kana basa rako risingadi) ungangodaro usade kuenda zvakadzika mukuziva misiyano, asi asi kuti zvinobatsira sei iwe kushandisa GNU / Linux (zvisinei nekunaka, Debian kana Ubuntu).
JUAN KILL akadaro
Zvakanaka, ini ndaive paUbuntu uye haina kupunzika, kana kuti chando kusvika pakuti handikwanise kushandisa kana iyo keyboard kana mbeva uye zvine mukurumbira REISUB muUBUNTU 14.04 Izvo hazvina kushanda futi, ndakaenda ku DEBIAN 8.2 Right ikozvino uye anofara kwazvo zero inotonhora kana tsaona Ivo havachandifambise ini kubva kuDEBIAN JESSIE.
Pindura kuna JUAN MATA
Chero evaviri, zvinoenderana nezvamunoda, ndine zvakapoteredzwa… .1997 mune linux world, ndakatanga nered ngowani, ndikazoenda kudebian imomo muna 1998, ndakaedza mavhezheni mazhinji edistro yega yega kusanganisira UBUNTU… .mhedziso yangu ndeinotevera: Debian ndiye uye acharamba achive baba hwerunyararo, kuita uye kusimudzira… pasina kupokana.
Mhoroi Isaac, chinyorwa chako chakaratidzika kunge chakanakisa, chakajeka uye nehana, ndiyo data inodiwa neanotanga kusarudza distro ... uye ini ndinobvumirana newe, Ubuntu ndewevanyowani uye weDebian wevanhu vane ruzivo rwakawanda.
Ndanga ndichishandisa Linux kweanopfuura makore gumi, ndakafamba nemumazhinji distros uye "ndakabira" vanhu vazhinji kuLinux nyika.
Zvirokwazvo Ubuntu naDebian vanogona kuita zvakafanana, asi hazvidi kuedza kumwechete kuzviita mune imwe senge mune imwe uye kana iwe ukangotanga ivo vokuudza kuti "vhura koni" kwakafanana nekupinda mudivi rakaenzana uko ZVESE hazvizivikanwe kwauri.
Nhasi ndinoshandisa Debian uye ndinogadziridza zvirongwa zvangu nekunyora zvinyorwa uye zvinonditorera maminetsi, zvinotora nguva shoma kuzviita kuburikidza neconsole pane kubva ku graphical interface, asi sekutaura kwandaita ndanga ndiri mune izvi kwemakore gumi uye ndine anga ari programmer kwemakore makumi maviri nemaviri, asi newbie senge musikana wangu anoda kutanga kutarisa zvinhu, kuvhura iyo koni inorema, yakaoma uye inotora nguva, izvo zvandinobvuma kuti Ubuntu ndeyevanyowani.
Ndiri kungo gadzira diki gadziriso maererano neSteam, kunyangwe Valve ichikurudzira Ubuntu sedistro, inomhanya zvakakwana paDebian, ini ndakaiisa uye yega Game yandakayedza paLinux, yakashanda pasina dambudziko.
Kudzoka ndatenda nesfupiso, yakajeka uye chinangwa
Mushure mekuverenga zvimwe zvirevo, ndichaenda kunosiya mubvunzo kune vese vanotuka uye vanozvitutumadza uye vanogumbura munyori wenyaya nekuti anofumura zvikonzero zvekushandisa Ubuntu. Kana debian iri "nyore kushandisa", nei ndisingakwanise kuisa madhiraivha eIntel kadhi yevhidhiyo kubva kune inoisa mifananidzo? ...
Kune avo vachiri kufunga nezvazvo, ini ndichakupa mhinduro, uye ndezvechikonzero chimwe chete icho Ubuntu chiri hushamwari kune novice uye wekupedzisira mushandisi, nekuti sezvo ichiva chakakurumbira kugovera, makambani mazhinji anoshanda pamwe neUbuntu ku gadzira zvishandiso zvakapusa panguva imwe chete.style «inotevera, inotevera, inotevera» uye ndizvo zvinoda mushandisi wekupedzisira, nekuti havazi vese vanofarira kuziva mashandisiro ekushandisa koni, kana maitiro ekuumbiridza chirongwa kana mashandiro efaira faira mukati uye vane Rusununguko rwekusarudza izvo uye MUNHU WESE anofanira kuzviremekedza, nekuti ndizvo zviri pamusoro peGNU, nezveRusununguko kusarudza zvatinoda, saka pachinzvimbo chekugumbura mumwe munhu anoedza kuita mupiro unovaka, zvipire mukufunga kana iwe vari kunyatso kudzivirira rusununguko rwekusarudza kana Kana kungorwira chokwadi chekurwira.
Uye hongu, Ubuntu yakave yekupararira kwakakurumbira, nekuti kunyangwe iwo mazhinji emastros aiita yakaoma installers, vakasarudza kugadzira yakapusa, iine sarudzo shoma asi iyo yaigona kugadziriswa nevanhu vane ruzivo shoma uye neinternet kubatana ichiri Izvo. yakanga isiri izvo zvazviri nhasi (verenga makore gumi apfuura), ivo vakasarudza kutumira ekumisikidza maCD nemaDVD maHURI chero kupi munyika uye izvo zvakaita kuti zvizivikanwe, zviise pamiromo yevanhu vazhinji uye izvo zvakavawanira mukurumbira uye ivo yakaratidzawo nzira nekuti kusvika zvisati zvaitika, ma installers aive akaomarara uye nhasi vari chinhu chiri nyore icho chingangoita chero munhu akamboisa Windows anogona kumhanya.
Uye zvese izvi zvinoudzwa nemumwe munhu anoshandisa Debian kubvira vhezheni 6, mumwe munhu asingashandise chero graphical package yekuisa asi anoshandisa apt kana kugona, kana anoshandisa mc kana anoshandisa vim kugadzirisa mafaera, mumwe munhu anoronga kuburikidza nessh console panzvimbo uchishandisa graphical ide.
Saka ndinodzokorora, rega kunetsa vanhu vari kuyedza kupa mupiro kuitira kuti vanhu vasarudze vakasununguka uye kuti pakupedzisira ndizvo zvazviri izvi, RUSUNUNGUKO.
Pasina zvimwe zvandinotaura ndinoonekana uye mazwi angu ekupedzisira ndeemunyori wenyaya, ndakaenderera sezvizvi, ndakaenderera mberi ndichikurudzira rusununguko.
Zvakanaka, ndafunga pahunhu kuchinjika kwayo…. kana yapinda uye yajairidzwa, chingave shanduko inogona kuita debian ... uyezve sekureva kunoita trungus ... isarudzo yemunhu wese zvinoenderana nezvavanoda kana zvavanofarira ...
Ndipindure kana ndiri
Ndakaedza masisitimu mazhinji eDEBIAN uye UBUNTU. Chekupedzisira, kumisikidzwa kwandaifarira zvakanyanya kushandisa DEBIAN mune console mode sevha yedhatabhesi ine kuita kwakanakisa uye ubuntu kukudziridza kunyorera uye kusevha pawebhu. Kwandiri iwo musanganiswa wakanaka kwazvo. Nechikonzero chimwe chete icho vanoenderana kwazvo mumirairo, pane ruzivo rwakawanda pane network kune zvese zvakagoverwa uye nekudaro musoro wenyaya kana ndisingakwanise kuuwana mu DEBIAN ndinogona kuuwana muUBUNTU.
Luis MUZQUIz akadaro
Mumwe munhu anoziva kugadzira maapps anogona kundibata ndapota. Luismuzquiz aroba hotmail dot com
Pindura Luis MUZQUIz
Chinyorwa chakanaka kwazvo. 1 gore rapfuura uye chimwe chinhu chakaitika kune nyika ye linux, ndaneta nekutsemura zvese zviri mumawindows (shh) nekukuvara kusingaperi, uye mavairasi ... yyy .... tsime, rinondipa mahwindo, ndave ndiri nyanzvi kwemakore gumi uye ndoda kundigamuchira semuongorori wehurongwa. Mugore rino ini ndanga ndiri pane linux, ndakaedza akawanda distros. Ubuntu, Debian (iyo yandiri kushandisa chaizvo izvozvi neumwe wangu pabhuku rekunyorera, zvinoshamisa ...), Mint (ndinayo pa desktop yangu), suse, manjaro, sorin, kali, mbwanana ... uye ndinogona kuenderera , Ini handitomboziva yandakayedza. Chinhu chinoshamisa pamusoro penyika ino, hachisi icho chiri nani kana imwe kana imwe, ndechekuti iwe unogona kusarudza zvese, kubva kune yakajeka graphical, kune iyo software yaunoda kuisa, zvese ... izvo zvakasiyana siyana zvinoshamisa, uye ndizvo chinonyanya kushamisa. Iwe haufanire kuroora chero ubuntu kana debian. Tinofanira kutsvaga iyo inotibatsira zvakanyanya, kana iyo inonyanya kutibatsira. Ini handikwanise kuramba izvo kune zvimwe zvinhu ini ndichiri kushandisa windows, kune imwe Linux, uye zvinoenderana nekuti chii kana chii chaunoda kushandisa imwe kana imwe distro, imwe kana imwe desktop.
Zvandisinganzwisise, ndezvekuti ivo vanotaura nezve iko nyore kwekumisikidza ... ini handifunge kuti mushandisi wakajairika, (sezvandakaverenga ipapo, musikana wemumwe munhu semuenzaniso) anogona kuisa ubuntu, debian, windows, kana chero kubva 0 mune pc ... kana iwe uchigona kuisa ubuntu, unogona kuisa debian ... uye kana iwe uchigona kuisa OS chero zvingave zviri, imhaka yekuti iwe une ruzivo, iwe hausi mushandisi wakajairika ... ndinotaura iwe nekuti ini ndinobata nevanojairika vashandisi zuva nezuva, uye ndinokuvimbisa iwe ... ivo havaise kana windows pane pc ... zvese zvine hunyanzvi ...
Zvisinei, ini ndinofunga iyo yakanakisa distro inoenderana nechinangwa chayo ... nekuti kutaura nezve kuita, isu tinofanirwa kutaura nezve izvo zvakaoma zvatinoshandisa ... kana tiine i7 ine 16gb yegondohwe ... gadza imwe kana imwe, ese ari maviri achabhururuka, angave ane kde, ane gnome, kana chero ... kana iwe uine 4gb mbiri musimboti, 2 ichakushandirawo iwe.Parizvino, ndine debian 8.4, mune ino kabhuku kekuti ini akati, dual musimboti ne4 gb, matte desktop, uye iri kudya 700mb yegondohwe hapana chimwe ... Ubuntu ingangodya zvishoma, asi zvakadii? 1gb yegondohwe? 1.5?
Chinhu chakasiyana, kana tichitaura nezve netbook semuenzaniso, ndine imwe, ine processor yeatomu processor, 2gb yegondohwe, 7 skrini ... Ini ndaigona kutaura kuti pakati pe lubuntu uye debian neLXDE, zvakandipa nani debian mashandiro ... (tarisa izvo zvandinokuudza… Isa inofanirwa pane netbook)….
Kuve sekukuudza kwandakaita kuti anopfuura gore rimwe chete rapfuura, ini ndaizoti kanenge maviri kuti ndinoshandisa linux, nguva yadarika ndakanga ndisingakwanise kupinda mukubuda, nekuti ndakanga ndarongedza chikamu che diski mumahwindo, uye pandakanga ndichida kupinda , Ini ndine chikanganiso cheUIID kana chimwe chinhu chakadai, ini ndanga ndisingazive ... uye kutsvaga ini ndawana mhinduro ... asi kuti munhuwo zvake haaite ...
Zvekunakirwa pane mavara vanhu! runako rwuri kugona kunakirwa neiri uye mahara software!
Yakanaka chinyorwa, ndanga ndichishandisa Ubuntu kweinenge mwedzi gumi, uye ini ndaona iri yakanaka, zvisinei izvozvi ndichaedza Debian asi pakombuta, nekuti mumaseva ndinoiona seyakanakisa yemahara ... ini ndoda yepamusoro kuita uye ndinongova yepakati i10 ne3 gondohwe, nekuti ndinotya kuti sarudzo yakanakisa ikozvino Debian = (.. Nyasha
Debian yakanyanya kuchena uye hunyanzvi kupfuura Ubuntu, iyo inoita senge kindergarten interface mumaonero angu, zvisinei kuenzanisa hakubatsiri kana Debian isingasanganise maWi-Fi network madhiraivha, ayo anoita kuti kumisikidza kuve kusingabatsiri, sezvo kuchichiita kuomarara. Zvino kana ndine Ubuntu ndinofanira kusarudza izvi, hapana nzira :-(
Pindura kuna gengiskanhg
Shandisa zvakakunakira uye kana usingaizvide, chinja, zviri nyore
Izvi zvinodaro nekuti mune ese madhiri ekuisa, iri 100% yemahara software, muchokwadi inonyoreswa mune yemahara software hwaro. Mushure mekumisikidza, unogona kugonesa iyo repositori yeisiri-yemahara software uye nekuisa iyo linux-firmware-isina-huru apo zvine chokwadi kuti chii chakakosha kuita yati wifi. Mune yangu kesi ne ubuntu ini ndinogara ndine dambudziko rakafanana ne r8169, zvakafanana zvandinofanira kuumbiridza mune zvese ubuntu uye debian. Ini ndinofunga zvakanyanya kuita sekuda kwatinoita kuGoogle nekugadzirisa matambudziko. Chekupedzisira chinoshanda seruzivo rwega.
Ivo vatove neni kuguta neakawanda debian uye ubuntu uye ivo vanosiya kumashure arch linux, kare uye yakavhurika suse iyo parizvino ndiri kugara ne arch linux sezvo iri yepamusoro yepamusoro ubuntu uye ivo vanofanirwa kuve nazvo kuti vakawedzeredzwa ... edza zvinhu zvitsva uye ini handizive chii chinotengeswa kunyengedzwa nemazwi evanhu vanotaura nechiropa kwete nehuropi, ndinokurudzira kuti uedze linux distros wobva watonga (ini ndinokurudzira arch linux) ikozvino vanhu vese vanoshandisa linux iyo isingachashanda debian ndeyevashandi ... ndiwo marara izvozvi chero munhu kunyangwe ambuya vangu vanoshandisa linux.
"Rwira rusununguko rwe software" yakadii dudziro
David manzanares akadaro
Ndakaedza akawanda ma distros uye ndinogara ndichiguma paDebian, iyo inoshanda zvakanyanya.
Pindura David Manzanares
Ndakaedza akawanda ma distros uye ndinogara ndichiguma paDebian, yakanakisa.
Vicente Coria Ferrer akadaro
Ini ndinopedza maawa ndichiverenga maforamu eDebian vs Ubuntu, OpenSuse vs Fedora nezvimwe, nezvimwe. uye 99 muzana yezvakanyorwa inyaya dzinodzokororwa sekunge marobhoti akarongwa. Ngatione zvimwe:
1) Debian ndeye nyanzvi uye Ubuntu ndeyevanyowani. Ini ndatsvaga zvakanyanya imwe nyanzvi app iri paDebian uye kwete paUbuntu. Handina kuzviwana. Hapana chinhu chingaitwe muDebian chisingakwanise kuitwa nenzira imwecheteyo muUbuntu.
2) Debian inonetsa kuisa uye zvakare zvakaoma kuwana vatyairi vemidziyo. Inongova nhema. Pane ino webhusaiti: http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/8.5.0-live+nonfree/amd64/iso-hybrid/
isu tinokwanisa kurodha iso mifananidzo pamwe nemadhiraivha uye zvine chekuita nesoftware uye zvakare muhupenyu fomati iyo inogona kuyedzwa usati waisa. Debian's graphical installer yakanyatsojeka seUbuntu.
Zvimwe zvinhu zvandakaona pakombuta yangu ine mvura-yakatsiga Intel i-7, maSSD maviri, uye gumi nematanhatu gigs e RAM.
Iyo psensor application inoongorora iyo tembiricha uye ine Ubuntu 16.04 inogara pakati pe28 ne33 degrees. NaDebian Jessie tembiricha iri kubva pamakumi matatu kusvika makumi matatu neshanu. Ini ndinofanira kuwedzera izvo kuna Debian Jessie ndinofanira kuchinja kernel kuburikidza ne backports ye33 sezvo webhusaiti yeDebian webhusaiti ichiraira kushandisa kernel yakaenzana kana yakakura kupfuura 38 kana iwe uine SSD disks.
Muchidimbu, ini ndinonzwa kuti vazhinji vashandisi veimwe vhezheni yeLinux vanayo semutambo uyo unogadzira kuita kuti zvese zvishande. Havana icho sechishandiso chebasa. Linus Torvalds iye amene akaramba achitsoropodza kugoverwa kwekuve kwakaomarara kubata. Kana ini ndikatenderwa fananidzo, ngatifunge kuti iwe unotenga terevhizheni uye tuner irikushaikwa uye kunze kwekugadzirisa. Paunoona kuti haishande, unogunun'una uye vanokuudza kuti iyi terevhizheni yenyanzvi, unofanirwa kuzvigadzirisa iwe nekutsvaga muzvitoro zveiyo tuner isipo wozviisa wega. Kupatsanurwa, nzvimbo yedistro yenyanzvi uye distro yema novice, inofanira kunge iri: Kugovaniswa kune avo vanoda komputa sechishandiso chebasa, uye kugoverwa kune avo vanoda kutamba kuti vatore kadhi yemifananidzo, purinda uye kutamba mavhidhiyo pasina matambudziko Uye nenzira iyi, kana vaiwana vanogona kusvetuka nemufaro vachiti: Eureka !!! Ini ndatova nyanzvi !!!
Pindura Vicente Coria Ferrer
Euclid Marin akadaro
Yakanaka post shamwari inotsanangura kusahadzika, mutsetse wekutanga ini ndinosarudza paUbuntu asi izvozvi ndiri kuda kuziva Debian.
Pindura kuna Euclides Marin
probe open suse ubuntu 16.04 zorin 12.01 mint 18.1 iyo isina kundibvumidza, ini handina kuzombo gadza ubuntu studio 16.04 kuisirwa kwakarembera, ongorora Debian 8.7.1 iyo yandaive ndisina matambudziko nayo, saka ndinovimba kupedzisira ndasiya windows 10 yandaigona nayo usambopise linux ISO nguva dzose panguva yekuchinjisa kune iyo dvd yakamisikidzwa chikanganiso, saka ndaifanira kuipisa ne windows vista
Pindura kune akorps
Louis Montoya akadaro
Ruzivo rwakanaka kwazvo ini ndakaedza fedora, Suse, Ubuntu, Ubuntu Mate, red had, archi linux uye pachezvangu iyo yakandishandira zvakanakisa ivo vanofanirwa neiyo yapfuura, Ndiri kufara kwazvo nekombuta uye yakatonhora nayo kana ichifanira shanda zvakakwana
Pindura Luis Montoya
Ndakaverenga kushoropodzwa kwese ari maviri masystem uye iwe unoziva zvandinofunga… .totenda kuna debian uye ubuntu ini ndakasiya windows uye yave nguva yakareba kubva pandakamira kutambisa nguva ndichiisa zvigamba uye kutsvaga mapassword uye kunzwa kunge mbavha yakakwana kana uori. Hana yangu yava pachena nekuda kwevakomana vakaita semi vanokudza Linux combo.
Panzvimbo pekukakavara, ngativandudzei uye tigadzire super linux iyo Bill inomusiya achizunza (ha ha).
Kunze kwekuseka kushoma ndatenda vakomana
Ini ndaive ndisina chokwadi chaicho chekuisa uye iwe wakandijekesera icho zvakakwana. Ndatenda
Kana iwe uchida kushandisa Debian usinganetsi hupenyu hwako, isa Point Linux ine Mate desktop kana XFCE, zviri nyore kuisa nekushandisa, uye kana iwe uchida kushandisa Ubuntu, isa Lubuntu neLXDE, inokurumidza, yakajeka, iri nyore shandisa uye nekugadzirisa kwakanaka, kukwazisa ...
Iwe unoda iri Nyore kushandisa debian kuisa? tsvaga MX Linux, iri nyore, ine zvimwe zvekushandisa kune iyo rustic Debian uye nekukurumidza kwazvo xfce desktop. Vachafadzwa.
Juan Carlos Casas akadaro
Yakanaka chinyorwa, yakajeka uye yakakwana. Ndatenda zvikuru nemupiro uyu.
Kwaziso kubva kuMedellin-Colombia XD
Pindura Juan Carlos Casas
Edgar morales akadaro
Yangu nyaya neLinux:
Ndakatamba naKnoppix (yakavakirwa paDebian), ine LiveCD.
Asi, ini ndakatanga iyo Linux kuisirwa neDVD yeSUSE Linux, hongu: SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED), ndaida uye ndaida. Pandakavandudza vhezheni yangu yeSUSE Linux Enterprise Desktop kuti ivhureSUSE, ndakafara. Yese hafu yegore, ini ndaizo fomatiira yangu yakaoma dhiraidhi uye kugadzirisa ZVESE.
Ehe, zvirokwazvo: Yakagadzirisa ZVESE. Ndakadzidza zvakawanda. Asi, pandakagadzirisa Linux yangu yaizotyoka. Kukanganisa kweYast, zvichienzaniswa neSynaptic, ndiko kuti Yast kurodha pasi nekuisa "pane nhunzi", uchifunga kuti simba haridzime, internet haibude nezvimwe, nezvimwe, zvese zvinokweva zvakanaka, asi nepakarasika pasuru kana kutsamira: PUM, kuvhuraSUSE mabhureki.
Synaptic, tora ZVESE usati watanga kuisa. Ini handidi kupinda mu * .deb vs. * .rpm
Ndisati ndaenda kuDebian, ndakashanda neLinux Mint (Yakavakirwa paUbuntu), yakandimaka zvakanaka, uye mushure mekufara kuomesa Hard Drive yangu mwedzi mitanhatu yega, ndakaenda kuLinux Mint Debian Edition. Kutenda kuLinux Mint, ndakaswedera padhuze neUbuntu naDebian. Asi kamwe kamwe, basa rangu rakanga risingachandibvumiri nguva yekumomesa nekuisa vhezheni yeGNU / Linux (Ndinoziva ndicho chinhu chakakodzera kuita, asi ini ndicharamba ndichikuudza Linux nekanganwiro kubva kuna Richard Stallman), mwedzi mitanhatu yega yega, uye ini ndaida chimwe chinhu chakatsiga asi chisiri chechinyakare.
Ubuntu LTS vs Debian Kwayedza (quasi Rolling Kuburitswa), inotungamirwa neLinux Mint.
Ivo HAVANA enzaniso, asi mune angu mamiriro ini ndaifanira kutora danho. Sarudza Linux Mint kana Ubuntu LTS, inopesana neDebian Testing (Debian yakagadzikana, yanga isiri sarudzo uyezve yaive Debian SID).
Ini ndanga ndisisade (uye handidi), fomati dhiraidhi rangu uye isa ZVESE, yega mwedzi mitanhatu. Zvekare, ini ndoda kuvhuraSUSE, asi nekuda kweYast, ini ndinoda Debian ine Synaptic (kana APT).
Kuedzwa kweDebian kwakanditendera kuti ndichengetedze zvishandiso zvangu kumusoro uye zvichimhanya kweanoda kusvika makore masere uye kuverenga, ndisinga fomati kwemwedzi mitanhatu yega yega.
Ini handina kupa Ubuntu LTS mukana (kana kupotsa mukana wayo neni), nekuda kwechikonzero chimwe chete ichi: Ini handisi kuzo fomati nekuisa ZVESE mapakeji angu makore maviri ega ega. Parizvino, Arch kana chinobva: Gentoo, Sabayon, Manjaro ..., haisi sarudzo: handina nguva yekugadzirisa kana kukwidziridza timu yese, kunyangwe pavanenge vari Rolling Release. Parizvino HANDI mune mamiriro ekuti Linux yangu iputse; uye kana zvirizvo, vhuraSUSE tumbleweed ichave yangu yekutanga sarudzo.
Pamwe mumakore mashoma ndichaedza, asi parizvino, ini ndoda kugadzikana mumapakeji nezvirongwa, kuvandudza zvishandiso pasina kuomesa zvisina kufanira dhisiki rakaoma mwedzi mitanhatu yega yega kana makore maviri ega ega kana kushandisa nguva ku "tune" Linux yangu neiyo src. Kana nekuti inotyoka nekuda kwekusaenderana.
Kana iwe uine nguva yemahara: edza, kuyedza, dzidza; Linux inoshandura hupenyu hwako: deb, rpm, src yakakura yega yega zvichienderana nezvinodiwa.
Uye kana iwe usina nguva yemahara: shandisa Debian Kwayedza, kana Linux Distro iri Rolling Kuburitswa (saka haufanire kufomati yega yega yepakati kana makore maviri ega ega).
Kana iwe uchida kushandisa Linux pasina kunetsekana, kune: yekutanga OS, Linux Mint, Deepin, manjaro, fedora nezvimwe ...
Iwe unoda kuve neushingi: Arch kana zvimwe zvinorema senge Slackware.
Ubuntu vs Debian: Chishandiso chakajairwa kupokana nehunyanzvi chishandiso. Aya ndiwo maitiro andinoita muchidimbu.
Ini ndiri Nyanzvi, ndinoshandisa Debian.
Ichi ndicho chiitiko changu.
Paunenge uchida maturusi akajairwa, ini ndinokurudzira Linux Mint (Ubuntu Kubva) kana Ubuntu. Paunenge uchida maturusi ehunyanzvi, ini ndinokurudzira Debian Kwayedza.
Ini ndichakurudzira zvichibva pane zvinodiwa nemushandisi wega wega.
Asi ini, ini ndiri Debian.
Pindura kuna Edgar Morales
Iwe hauchadi kuita fomati mwedzi mitanhatu yega yega kuti uise iyo nyowani vhezheni, nemurairo uyu, unoshanda kune vese Debian neUbuntu, unogona kugadzirisa vhezheni yacho pasina kuita
sudo apt dist-kusimudzira
wobva watangazve uye iwe une vhezheni itsva
Zvisinei hazvo ndinofanira kukuudza kuti Debian Buster akatsiga ane rutsigiro kusvika 2024
Zviripachena ichi chinyorwa chakanyorwa nemumwe munhu ane Ubuntu.
Wilfredo mendoza akadaro
Ini ndashandisa Ubuntu 14.04 server kwemakore mana pamaseva maviri, imwe yekushandisa uye imwe yedhatabhesi uye ini handina kumbove nematambudziko chero nguva ivo vanoshanda 4/24 kuongororwa kwegore nemakambani, zvisinei gore rino munaNovember ndiri kuwana imwe server mune iyo yandinoronga kuisa debian.
Pindura kuna Wilfredo Mendoza
Ini ndaive mushandisi wehunhu, asi nekuda kwekuda kuziva ndakachinja kuita debian (pakupedzisira ndakazoona kuti komputa yangu yanga ichimhanya zvishoma pane zvese) saka vakomana, kana muchida chimwe chinhu chisingapedze zviwanikwa zvakawanda, ipapo debian, Kunze kwekuita unogadzirisika, hongu, uchafanirwa kuisa mamwe madhiraivha kana zvichidikanwa kana chero zvodii unofficial debian)
Pindura kune lykos
Jorge Caraballo akadaro
Muna 2014, ndakadyiswa neWindows, ndakapinda muUbuntu uye ndakafadzwa. Sezvo nguva yakafamba, sezvazvinowanzoitika kune vedu vanotanga kuyedza neGNU / Linux, ini ndakatanga kuyedza kumwe kugovera, imwezve, imwezve ... Ndakadzokera kuUbuntu, asi ini ndaigona kunzwisisa kusagadzikana kwayo, nematambudziko nemamwe mapakeji esoftware asina mahara. Hazvisi izvo zvandaitsvaga muhurongwa hwekushandisa zvaizokodzera hunhu hwangu. Ini ndaida yakagadzikana system iyo yaisafanirwa kunetseka nezve software mapakeji. Kuti yaive iine zvese zvawainyatsoda kubva kune yekushandisa system. Uye zvakanaka, ini ndagara ndichinzwa mhinduro yakanaka kubva kuna Debian mune izvi, kunyanya kugadzikana. Zvakare pandakaverenga nezve iyo 59 kana so mapakeji andaive nawo (kare ikako, makore maviri apfuura), ndakati kwandiri ndega: "wow, mukati memakumi mashanu neshanu mapakeji anowanikwa, panofanirwa kuve nezvose zvandinoda chaizvo." Izvi zvakare zvakaita kuti ndifungisise nezve izvo zvido zvakagadzirwa. Kazhinji vagadziri veesoftware uye vekutengesa anoshanda masisitimu anowanzo gadzira zvido muvashandisi vavo, uyezve vovaita kuti vatsamire pachigadzirwa chavo, kana kuvagadzika pazvigadzirwa zvavo. Ndichiziva izvi, ndakafunga kuti pane zvaidiwa zvandakanga ndagadzira zvandaigona kusiya, ndichipa mushandisi wangu. Muchokwadi ndakakwanisa kusiya zvimwe zvaidiwa, uye izvo zvanga zvisiri, ndakakwanisa kuzvigutsa neimwe nzira muDebian. Aya ndiwo maitirwo "kubaya". Pave nemakore maviri kubva kudzvanya uku, uye kubvira ipapo, ndanga ndichifara naDebian 😎️
Pindura Jorge Caraballo